Frenkie de Jong Cartheel Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha Xogta
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Holland Frenkie de Jong Cartheel Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha Xogta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'de Jong'. Our Frenkie de Jong Childhood Story iyo wargeysyada aan la isku qorin Xaqiiqooyin waxay kuu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay asalkiisa qoyskiisa, sheekada nolosha ka hor caan ka ah, kor u qaadida sheekada caanka ah, xiriirka iyo nolosha qofka.
Haa, qof walba waa ogyahay inuu qaab ciyaareedkiisa khadka dhexe ku jiro. Si kastaba ha noqotee, dhowr ka mid ah tixgelinta Frenkie de Jong's Biography oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Frenkie de Jong Ilmihii Hore Sheeko Xogta Aan Laheyn Xaqiiqada Raadinta- Taariikhda Hore iyo Qoyska
Frenkie De Jong wuxuu ku dhashay 12th maalinta Maajo 1997 ee Arkel ee Nederland, ayaa sidoo kale sheegay in xiddiga kubadda cagta Brazil Marcelo wuxuu ku dhashay. Young Frenkie wuxuu u dhashay hooyo oo kubad ku ciyaartay iyo aabihiis Yooxanaa, sidoo kale wuxuu ahaa ciyaaryahan kubadda cagta ah oo u soo ciyaaray kooxdii ugu horeysay ee ASV Arkel. Intaas waxaa sii dheer, awoowaha Frenkie wuxuu ahaa kubad ciyaara kubbadda cagta walow intuu walaalkiis ka yar yahay, Youri wuxuu u ciyaaraa A1 ee ASV.
Frankie wuxuu ku koray kubbadda cagta ee kooxdiisii ​​uu ku dhashay ASV Arkel, taas oo farxad u ah waalidiinta isboortiga jecel ee jecel inuu daneynayo ciyaaraha. Sida laga soo xigtay ciyaaryahanka reer Holland:
"Had iyo goorba waxaa la ii ogaaday inaan kubad ku ciyaaro tuulada la saaxiibo. Waxay aheyd isboorti aan ku riyaaqo ciyaaro mar kasta oo aanan u baahnayn inaan aado dugsi "
Frenkie wuxuu ku fiicnaa kubada cagta, xitaa da 'yar oo da' yar, isaga oo xiiseynaya akadeemiyado si wanaagsan u dhisan oo doonayay in uu ka soo qaato naadigiisa, xaqiiqda aabihiis ayaa si cad u muujiyay sida soo socota:
"Dadka indha-indheeya ayaa horeba albaabka joogay Marka Frenkie shan jirsadey."
Frenkie de Jong Ilmihii Hore Sheeko Xogta Aan Laheyn Xaqiiqada Raadinta- Dhismaha Xirfadaha
Kaalinta dhalinyarada ee xayawaanku waxay ahayd todobo kaliya markii aabbihiis uu u arko inuu ku yimid da 'yar oo kubadda cagta ah. Dhamaadkii, Frenkie wuxuu ahaa sanadka 2004, oo loo qaaday tijaabooyin kooxda reer Holland ee Feyenoord iyo kooxda dhexe ee Willem II. Ciyaartoyda kubada cagta ayaa ku guuleysatay labada ciyaarood, waxaana ay laheyd xoriyad ay ku qaadato koox.
Inkastoo uu aad u da 'yar yahay, Frenkie ayaa si daacad ah u doortay Willem II kooxda Feyenoord. Doorashadu waxay u noqotay mid la yaab leh qoyskiisa oo la siiyey xaqiiqda ah in ay ahaayeen taageerayaasha Feyenoord oo ah kuwa u dhinta. Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay muddo dheer oo la caddeeyey inay si fiican u fekerayaan Dutch-ka.
Frenkie de Jong Ilmihii Hore Sheeko Xogta Aan Laheyn Xaqiiqada Raadinta- Waddada Weyn
Waxay ahayd nidaamyada dhalinyarada ee Willem II in Frenkie uu dhisey oo uu hormariyay sifooyinka kaasoo ah sifooyinka muuqaalkiisa imika oo ay ka mid tahay awooda la aqbali karo si ay wax uga qabato waxyaalihii ugu adkaa.
Ciyaaryahankan da 'yarta ah ayaa soo jiitay kooxo badan oo ka mid ah tababarayaasha heer sarre ah, sida tababaraha Willem II ee tababare 15, Jos Bogers oo aan waligiis ka hadlin inuu ka hadlaayo tayada dabiiciga ah ee soo maray saacadiisii.
"Waxaan wareysi u diray website-ka Willem II waxaana la i weydiiyay ciyaaryahanka aan jecelahay. Sida iska cad, tababarayaasha ugu caansan Cristiano Ronaldo ama Leo Messi, laakiin waxaan u sheegay Frenkie De Jong, "ayuu yiri Bogers. Waxa uu ahaa farsamo ahaan fantastik ah. Taasi waa tayo dabiici ah. Qaar ka mid ah dhalinyaradu waxay u baahan yihiin inay wax badan ka shaqeeyaan si ay u gaaraan heer gaar ah, laakiin Frenkie uma baahna inuu tababar qaato si uu tusto tayadiisa. "
Fariimaha qoraallada ku saabsan Frenkie ayaa bilaabay cajiib ah.
Frenkie de Jong Ilmihii Hore Sheeko Xogta Aan Laheyn Xaqiiqada Raadinta- Kusoo caan bax
Ka dib markii uu u ciyaarayay nidaamka dhalinyarada ee Willem II, Frenkie wuxuu kulankiisii ​​ugu horeeyay ee Eredivisie ka soo muuqday 10th ee May 2015 intii lagu jiray ciyaar ay ku guul darreysatay inay guul darreysato ADO Den Haag oo ku jirta guusheedii 1-0.
Ka dib markii uu ku soo bilowday kulankiisii ​​ugu horeysay, kooxo dhowr ah ayaa isku dayay inay xaqiijiyaan adeegiisa sida Ajax iyo PSV. Frenkie, si kastaba ha ahaatee, ayaa u degay Ajax, isagoo heesaya afar sano oo qandaraas ah oo kooxda kula jooga xagaagii 2015.
Inkastoo uu Ajax Frenkie la galay kooxda qadka dhexe ee Jong Ajax halkaas oo uu sameeyay saameyn weyn oo uu u arkay inuu horumar ka sameeyay kooxda ugu sareeysa horyaalka ee 2016. Markii uu ku biiray kooxda heerka sare, Frenkie wuxuu kooxda ka caawiyay finalka 2017 Europa League, horumarka oo ay ka mid yihiin kuwa kale waxa ay u arkeen inay ku guuleysteen horyaalka Jupiler League.
Natiijo ahaan, Frenkie ayaa raadinayay kooxo isboorti oo ay ka mid yihiin Manchester United, Manchester City, Tottenham, Real Madrid, Barcelona iyo PSG kuwaas oo soo bandhigay xiisaha ay u qabaan isaga oo dalabyo ka dhigay. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Frenkie de Jong Ilmihii Hore Sheeko Xogta Aan Laheyn Xaqiiqada Raadinta- Nolosha xiriirka
Frenkie wuxuu xiriir la leeyahay saaxiibadiis quruxda badan ee loo yaqaan 'Mikky Kiemeney'. Jacaylka ayaa la kulmay oo bilaabay xiriirka halka Frenekie uu wali ku jiray nidaamka dhalinyarada ee Willem II.
Mikky waa jacayl isboorti oo ciyaaraya hockey. Labada qof ee da 'yarta ah waxay wada nool yihiin Amsterdam.
Mid ka mid ah qodobo badan oo ka dhigi kara taageerayaasha inay ka xanaajiyaan xiriirka lamaanaha waa xaqiiqda ah inay labadooduba wadaagaan dhoola cad. Miyeyan ahayn labalaab fiican?
Frenkie de Jong Ilmihii Hore Sheeko Xogta Aan Laheyn Xaqiiqada Raadinta- Jacaylka Barcelona
Frenkie ayaa si aad ah u jecel Barcelona markii uu la kulmay saaxiibtiisa. Naadiga reer Dutch ayaa kor u qaadeysa ma ahan kaliya kooxda Spain, laakiin ciyaartoydeeda xiddigaha waqtigaan.
"Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Pique, Dani Alves, Pedro, Messi, Eto'o, Villa. Waa maxay koox! Guardiola Kooxdu waxay ahayd waqtiga ugu fiican. Waxay ahayd farxad aad u daawato, laakiin waxaan u maleynayaa in riwaayad ay ka hor timaaddo. "
Waxay muujisay Frenkie.
Danta gaar ahaaneed waa Frenkie's Love for Barcelona ee haatan Lionel Messi oo uu ku riyoodo inuu ciyaaraha la ciyaaro.
Dabcan, waan jeclaan lahaa inaan la ciyaaro Messi. Laakiin waa ku dhawaad ​​31, waxaan u baahanahay inaan hurdo (qosol). Waan xasuustaa markii aan yaraa sida ay awoowe u iisoo siisay qalabkan calaacalka cagaaran ee Messi ee Messi. Waan xirxiray shaatigaan illaa inta ay igu yar tahay. "
Hase ahaatee, Riyadiisu waa mid aad u dhow sida uu aaminsan yahay in Barcelona ay isku dayeyso inay hesho saxiixiisa sida waqtiga qoraalka ah.
Frenkie de Jong Ilmihii Hore Sheeko Xogta Aan Laheyn Xaqiiqada Raadinta- Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
Frenkie waa ciyaaryahan kubbada cagta ah oo aan waligiis ku guuleysan inuu sheego xididadiisa. Inkastoo uu ciyaaray kubada cagta Ajax islamarkaana uu ku nool yahay Amsterdam, waxaa badanaa laga daawan karaa labo jeer isbuucii.
Isagoo ka hadlaya qaab nololeedkiisa, isagu waa wax aan waxtar aheyn oo uusan waxba ka qaban karin dharka qaaliga ah ama hantida kale. Dhinaca kale, Frenkie wuxuu noqon karaa mid adag, waxyaabo badan oo aan kufilan.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Frenkie de Jong Carthouse iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la isku qorin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Sheekada Carruurnimada Steven Bergwijn Plus Xaqiiqda Untold Biography
Arkadiusz Milik Sheeko Carruurnimada ah Xaqiiqooyinka Untold Biontold xaqiiqda
Quincy waxay ballanqaadeysaa sheekada Carruurnimada iyo Xaqiiqooyinka Taariikh nololeedka ee aan la Sheegin
AFRIKA CARUURTA FOOTBALL
Hakim Ziyech Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh
Donny van de Beek Sheeko dheeri ah Xogta Warka Xogta
Lasse Schone Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Dusan Tadic Sheeko dheeri ah Xogta Warka Xogta
Matthijs de Leaf Story Story Plus Xogta Waalidka ee aan la isku qorin
Kasper Dolberg Sheeko dheeraad ah sheekooyinka sawir la'aanta
Dabinson Sanchez Sheeko Xeel dheer oo Xogta Loo Yaqaano
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 15, 2020
Christian Eriksen Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 27, 2020
Dennis Bergkamp Storyhood Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha